Morocco: Morocco waxay martigelineysaa bandhig farshaxan oo sawir gacmeedyo ah - TELES RELAY
ACCUEIL » International Morocco: Morocco waxay martigalisaa bandhig weyn oo ah sawirro sawirqaade
AFP, ayaa daabacday Talaadadii 09 April 2019 ee 20h47
carwo ee masterpieces Impressionist 42 saxiixay magacyada weyn sida Monet, Cezanne iyo Renoir, si gaar ah amaah by Museum Orsay ee Paris, la caleemo saaray Talaadadii ee Rabat, caasimadda ah ee Morocco.
"Tani waa bandhiga ugu horeysay on Impressionism ogolaanaya wadaago qayb ka ciidda Afrika ee yaabab Orsay, waxaana rajeynayaa in dadweynaha Morocco raaxaysan doonaa," ayuu yiri Madaxweynaha Laurence des Baabuurta, Musée d'Orsay, ka hor inta varnishing.
Dhammaan ka galleries waaweyn Impressionist of museum Paris, kuwaas oo farshaxankiisa qarnigii sagaal iyo tobnaad waxaa lagu soo bandhigay by midabka, ka madow si cad, oo maraya ee codadka cagaaran-buluug iyo casaan "major" dhaqdhaqaaqa Impressionist, sida Bawlosna wuxuu ku yidhi Perrin, mid ka mid ah curators ee bandhiga.
Mid ka mid ah cathedrals-ka 30 ee Rouen oo rinji Claude Monet, oo Rabat ku yaal "qolka casaan", ayaa tusaale u ah.
"Haddii aan rinji iftiin, waa sababtoo ah waxa uu lahaa in ay rinji cad. Waxa aan ahaa natiijada aragtida ah, laakiin loo baahan yahay in ay ahayd in hawada ee qof walba, "dhawaaqay xigasho ka ahaatay Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), iridda laga soo galo bandhiga .
Bandhigga "Midabada Impressionism. Munaasabada ka soo baxa Musee d'Orsay "waxaa la soo bandhigi doonaa illaa 31 August August 2019 ee Matxafka Madxafka Madxafka Casriga casriga iyo casriga ee Rabat.
Morocco, oo leh shan iyo toban matxaf oo caam ah, ayaa sanadihii la soo dhaafay muujiyay rabitaan ah inay kor u qaadaan helitaanka dadweynaha, gaar ahaan Rabat oo caasimadda loo dhisay "City of Light".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actu.orange.fr/societe/culture/le-maroc-accueille-une-grande-exposition-de-peintures-impressionnistes-CNT000001ePwB3.html